Ungayithintela njani i-WhatsApp ekucimeni idatha yakho ngoNovemba 12 | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Tutorials, Whatsapp
Usenokuba uvile kule veki ukuba i-WhatsApp izakucima imiyalezo kunye neefayile ngoNovemba 12. Abasebenzisi abaninzi bayithathele ingqalelo into yokuba kukukhohlisa okutsha, kunikwa ukukhululeka ekusasazeni iindaba zolu hlobo. Nangona inyani kukuba inyani inyani kwezi ndaba. Kodwa indlela ebalwe ngayo okanye ekwabelwana ngayo kwinethiwekhi, okanye kwisicelo ngokwaso, ayichanekanga kwaphela okanye ayinyani.
Nangona kunjalo yinto echaphazela i-WhatsApp kwi-Google Drayivu, eziye zangundaba-mlonyeni kwiindaba, njengoko besikade siqokelele ngaphambili. Ke ngumba wokwenyani, onokuthi uchaphazele abanye abasebenzisi, kodwa ukhutshiwe ngaphandle komxholo. Sichaza ngakumbi malunga nayo apha ngezantsi.
Inkqubo yemiyalezo ivumela abasebenzisi ukuba bagcine i-backups zabo kwiGoogle Drayivu. Inkqubo engasoloko ikhuselekile, kodwa inikezelwa njengesisombululo esihle kwabo basebenzisa i-WhatsApp. Ingakumbi xa kuziwa ekufumaneni ikopi yogcino, inokuba luncedo kakhulu.
Iindaba ezinkulu ngoku yile I-WhasApp i-backups ayizukubala ukugcinwa kwangaphakathi kwiGoogle Drayivu, esele sikuxelele. Ke asizukuphulukana nendawo efini ukuba sifaka i-backups zethu kuyo. Isivumelwano phakathi kwamaqela omabini ngokungathandabuzekiyo esiba yinzuzo kubo bonke abasebenzisa usetyenziso lwemiyalezo. Kwaye oku kuyakuqala nge-12 kaNovemba, ukusukela ngala mhla kuya kuba semthethweni kubo bonke abasebenzisi bamaqonga omabini.
Kuza kwenzeka ntoni kwii-backups?
Isivumelwano sibonisa elinye inyathelo kubudlelwane phakathi kwamaqela omabini, abanazo ezinye izivumelwano ngaphambili. Nangona kule meko kukho isilumkiso kwabo bagcine i-WhatsApp ngokulondolozwa kwiGoogle Drayivu. Ukusukela nge-12 kaNovemba le, ezo backups zigcinwe efini, ezingakhange zihlaziywe ngonyaka, ziya kucinywa. Oku kuthetha ukuba umyalezo ekwabelwana ngawo unenyani.
Ukuqhubeka nokususwa kwayo, le fayile, ikwimo yogcino ikopi, kufuneka ithathelwe ingqalelo njengengasebenzi. Kuba khange siyisebenzise kunyaka ophelileyo. Kuphela ezo zingahlaziywanga ziya kucinywa, ke ukuba unayo ikopi yakutshanje, awuyi kuba nangxaki nayo.
Olu lutshintsho oluchaphazela abasebenzisi be-WhatsApp abaneekopi zencoko zabo kuGoogle Drayivu. Ukuba awunazo iikopi zazo, okanye ungazigcini kwiDrayivu, awuyi kuba nangxaki. Imiyalezo yakho okanye iifayile azizukucinywa nazo. Baza kuhlala kwifowuni yakho njengangaphambili. Ke ngekhe uzikhathaze nganto malunga noku.
Abasebenzisi ekufuneka "bexhalabile", ngandlela thile, ngabo basebenzisa iGoogle Drayivu ukugcina i-backups zabo. Kuba kufuneka sijonge ukuba azikho na ezingasetyenziswanga kunyaka ophelileyo. Ngaphandle koko, i-backup iya kususwa ngokusisigxina. Into enomsindo xa kukho into ebalulekileyo kuyo. Ke ngoko, kulungile ukuba ujonge ukuba ngaba ezi backups zikaWhatsApp khange sizisebenzise ixesha elide zinento ebalulekileyo, ukunqanda ukuphulukana nayo.
Indlela yokuthintela i-WhatsApp ekususeni olu lwazi ilula kakhulu. Ekuphela kwento ekufuneka siyenzile kule meko yile hlaziya ukhuphelo. Ngale ndlela, usetyenziso aluzukufumanisa ukuba ikopi ayisebenzi, kodwa yinto esiyisebenzisileyo kutshanje. Kwaye emva koko awusayi kuba sengozini. Le yinto esinokuyenza kwicandelo lokuxoxa kwisicelo. Ngaphakathi sinecandelo lokugcina, apho kufuneka sigcine entsha kwiGoogle Drayivu, nayo yonke idatha evela kwiingxoxo kunye neefayile ezivela kwincoko ebesinayo kuyo.
Ngala manyathelo, siyakuphepha ukuphulukana nedatha yabo. Kwaye ke, siyabona ukuba ezi ndaba zinenyaniso njani, kodwa ikhutshiwe ngaphandle komxholo, idala ukubhideka okukhulu phakathi kwabasebenzisi be-WhatsApp. Kodwa ngala manyathelo alula, asizukuphulukana nalo naluphi na ugcino esilugcinileyo kuGoogle Drayivu.
Ngaloo ndlela, singagxila kwiimpawu ezintsha Ezibandakanyiweyo kwi-app eyaziwayo, ufumene izitikha zakho, onokuzenza ngokwakho ngendlela elula kakhulu, njengoko uFrancisco sele ekufundisile kwesi sifundo. Ungaphoswa lithuba lokusebenzisa lo msebenzi mtsha kwisicelo semiyalezo esidumileyo, esiya kukuhlekisa kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ngaba i-WhatsApp iyakuyicima imiyalezo yakho ngo-Novemba 12?
Kungekudala uza kuba nakho ukucima imiyalezo ethunyelwe kuFacebook kwisithuba semizuzu eli-10